Iringi yeTungsten, iRingi yentsimbi yeTungsten, amakhonkco e-Tungsten Carbide - iOuyan
I-Guangzhou Ouyuan Hardware jewelry jewelry Co., ltd.
Isiseko kunye neKlasikhi yeTungsten Ring
I-Hammer Tugnsten Iringi enezixhobo ezininzi
Iringi yeTungsten eneInlay
Iringi yeTungsten eneLuphu kunye nokusika
Isangqa sentsimbi engenanto
Umtshato kunye neeBhendi zokuzibandakanya
Umtshato osisiseko kunye neRingi yokuzibandakanya
Umtshato oDala kunye neeBhendi zokuzibandakanya
I-CZ yomtshato weDayimani kunye neRandi yokuzibandakanya
Inlay Umtshato kunye neeringi zokuzibandakanya
lemveliso amadoda izacholo ngaphezu 10years amava.
Amadoda I-Tungsten Ring Retro Solid Glossy Sq ...
I-6mm yeTungsten Ring yomtshato womtshato wamadoda amaSi ...
I-6mm yamadoda yeTungsten Carbide Ring ekhazimlisiweyo ...
6mm Isilivere kunye 18k Gold Amanqanaba eyodwa Matte Poli ...
Uhlobo oluPhezulu lokuKhanya ebumnyameni obuKhanyayo beTungsten R ...
Iidragons zesilivere ezikhethekileyo zeCeltic ngeBlue Backgrou ...
Ihowuliseyili Amadoda jewelry 18K Gold ngumfanekiswana Black Gro ...
Hot Thengisa Blue ngumfanekiswana Tungsten khabhayithi Rose Gold ...
6mm Unisex wayesebenzisa Brushed Matte umphezulu Black A ...
6mm 8mm EKG Heartbeat Wedding Band Isilili Black ...
8mm ngesando igolide ngumfanekiswana amadoda tungsten ring mult ...
Ihowuliseyili ring ring amadoda
Factory Quality High Stainless Umhlathi elula ...
I-Factory Stainless Stainless engenanto Skul ...
Ihowuliseyili Iifowuni zeKhonkco zeKhonkco zeSilivere ...
Ihowuliseyili Stainless Blue Tone Vintage Free ...
Stainless amadoda Ring Ok Spade Ace Blac ...
Amadoda amabini-Strand osontiweyo Umgangatho oPhezulu weLea ...
Nokwaluka Isacholo Isacholo samadoda Bangle Bracel ...
Customade Leather Bracelet Skull Bracelet For M ...
Steel Men kaThixo aluka Red and Black Ithwathwa ...
Imisesane yeFlegi yaseMelika yaBasetyhini kunye naMadoda aMnyama ...
Jewelers Classical Simple Plain Tungsten yentsimbi ...
Inkampani yaseGuangzhou Ouyan Hardware jewelry isikelwe ukuseta unyaka we-2010, ivelisa iimpahla zamadoda ngaphezulu kwama-10years amava, kubandakanya izindandatho, izacholo, isacholo somqala kunye ne-tungsten, i-stainless, i-ceramic, kunye ne-titanium. I-moq esezantsi yokwenza ilogo yabathengi, eyona ntengiso iphambili i-USA, iYurophu, i-Egypt njl.njl ne-OEM / i-ODM, ukuhambisa ngokuthoba kwamkelekile.
Mens Isikwere Red Garnet Ruby Stainless Sol ...
Retro Vintage Stainless Star-ezinezinto Star ...
Ihowuliseyili Fashion Men Ring Ring Ukhakhayi ...
Imisesane ye-Stainless yamadoda yaBasetyhini oMnyama ngoKakayi ...
Uhlobo Retro Trendy Hemp Igqabi Stainless Stainless Me ...
Indalo 8mm Tungsten khabhayithi Ring Inlay nge Arr ...
Amadoda 8mm Ilitye kunye Abalone Shell Tungsten ...
Fashion Stainless Ukutywina amakhonkco Black ...
Isikhumba esimnyama esenziwe ngobuhlalu besikhumba ...
Mens Womens Hand-Made Multi-strand Black Red Br ...
3 Layer Cuff isongo Magnetic Steel Punk Style ...
Stainless ephothiweyo yesikhumba isongo Me ...
Ulwazi ngeeRandi zeTungsten
Khawufane ucinge ukuba unayo iringi engasoze ikrwitshe kwaye iya kuhlala intle njengalo mhla wawuthenga nje. I-tungsten echanekileyo sisinyithi esomeleleyo esomeleleyo esenziwe ngeqhezu elincinci ...
Malunga Ring Ubukhulu kunye Ring Ububanzi
Akukho mlinganiso umiselweyo kubungakanani beeringi kwaye abavelisi abaninzi benza amakhonkco ahluka kakhulu kubukhulu, kodwa ukuba ubukhulu bendandatho bukukhathaza, ijeeler yakho kufuneka ikwazi ...
Kutheni ukhetha intsimbi ye-tungsten
Iigrafti ze-Guangzhou ouyuan zehardware yifektri yokuvelisa iimpahla zamadoda ngaphezulu kweminyaka eli-10; kukho iiseti zoomatshini ezingaphezulu kwe-50 ezinabasebenzi abangama-30, i-10QC yamakhonkco apheleleyo okulawula umgangatho. Nazi iindlela ezininzi ...
Yintoni eyahlukileyo phakathi kwentsimbi ye-tungsten, ...
Zininzi izinto ze-jewelries, ayinamsebenzi kumadoda okanye kwabasetyhini, njenge-s925 yesilivere, igolide yokwenyani, i-ceramic, ukhuni, intsimbi engenasici, titanium, kunye ne-tungsten carbide. Ndicinga ukuba abantu abaninzi baya kuba ngabangaqhelekanga ...
Yintoni intsimbi yeTungsten?
Yintoni intsimbi yeTungsten? Isinyithi se-Tungsten lolunye uhlobo lwemveliso ye-high-tech elandelwa ngabathengi abaninzi emva kweseramikhi yendawo. Isetyenziswa kubuchwephesha besithuba se-shuttle, kwaye ngoku iguqulelwe kwi-ci ...
ufuna ukuseta ubudlelwane beebhasii nathi, namhlanje?
I-CZ yomtshato wedayimani kunye nomsesane wokuzibandakanya
Igumbi le-1015, iSakhiwo saseJinyan, iSithili seTianhe, iYantang Enterprise
Iringi yeTungsten, I-Tungsten yeTitanium yeringi 8mm, Imisesane Yomtshato Idayimane Negolide, Imisesane yamadoda amaTungsten aMnyama, Ubungakanani beRingi yeTungsten 15, imitya yomtshato yamadoda tungsten emnyama,